Archive du 12-nov-2020
Mama Liza, 54 taona  Efa nanolana ny zanako, fa tsy sahy mitory aho!
Zavatra mafy indrindra ho anny reny ny mahalala fa efa nahavita nanolana olona ny zanaka lahy. Isanireo misedra izany adin-tsaina izany i mama Liza. Mbola ao anatinny amparahatokany foana ny ditra nataon-janany lahy. Tsy sahy nitory anefa izy. Isaorana betsaka izy nizara ampaham-piainany, tsy nety niseho sary moa izy noho ny tahotra sy ny henatra, saingy entinay ny fijoroany vavolombelona hanairana ireo matahotra hitory kanefa efa nahita trangam-panolanana.
Maska tsotra kely, manala mony sy tasitasy
Manadio ny tarehy feno mony na malotonireo tasy avy aminny mony ity maska natoraly arosonny Jejoo anao anio ity.
Vehivavy 21 taona aho, mbola tsy nanao firaisana ara-nofo mihitsy.
Tsy maninona ve izany ? Matahotra ihany mantsy aho sao misy akony eo aminny fahasalamako izany.
Akora ilaina · Mananasy 1 · Manga 1 · Meringues 2 · Garana 3 · Siramamy mena 70g · Potsitra manga tsy mitapoka 1/4l
Selfie : Tsy tara taminizany ry Mr Bean, Madonna, Neil Armstrong
Mora ery ny fanaovana « selfie » aminizao fotoana satria ny ankamaroanny finday efa ahafahana maka sary ny tena avokoa. Tsy mba niandry izany nefa ny olona taloha raha mba te haka sary ny tenany koa, na hanao « selfie » fa dia, izay fakan-tsary nananany no nampiasainy.
Manary 6 kilao ao anatinny 3 andro, ny atao
Regime atao haingana ary tsy azo atao mihoatra ny 3 andro ity atoro anao ity. Azo lazaina ho hentitra ihany mantsy izy ity :
Efa voanny Covid-19 Misy lasa marary saina, marenina,
Mbola eto amintsika ny aretina covid-19. Satria somary maherihery io aretina io dia misy ireo olona izay nitondra takaitra taminy. Toy izao ny fanazavanny dokotera.
1. 13000ar le pot de 100g- Huile de soin : -Mampaniry volo -Mampijanona mihintsana -Manala angadrano Page Facebook « Beurre de cacao bio » Contact : 034 51 490 77
Sakamalaho : Mampitony aretina maro
Misy mandavan-taona ny sakamalaho ary azo tehirizina ela ihany koa. Tsara ny mahafantatra ny soa azo avy aminy sy ireo fomba azo hampiasana azy, mba hahafahana migoka ireo tombontsoa entiny.
KAOMININA AMPITATAFIKA Nahazo toerana fanodinana maloto manara-penitra
Olana ho anny kaominina maro eto amintsika aminizao ny tsy fahampianny foto-drafitrasam-pahadiovana sy fidiovana. Lohalaharana aminireny ny trano fivoahana izay saika tsy hananan ny ankamaroanny mponina.
Kaominina Antananarivo: nampiofana ireo mpampiofana mpivady
Notolorana fiofanana ireo mpampiofana mpivady atao mariazy sivily. Omaly 10 novambra dia nisitraka fampiofanana ireo tomponandraikitra rehetra avy aminny boriboritany enina eto kaominina Antananarivo Renivohitra. Atoa
Fampitàna ny lalao Barea- Cote dIvoire mivantana: ny Minisiteranny serasera no nahatontosa azy
Namoaka fanambarana ny avy ao aminny Minisiteranny serasera sy ny kolontsaina omaly ka nampahafantatra ny tena marina mahakasika ny fampitana mivantana ny lalao izay hiatrehanny Barea any Cote dIvoire, aminny Televiziona Malagasy.
Distrikani Bealanana : nisitraka herinaratra hanatsara ny fanjarian-tsakafo
Notanterahina ny 06 sy 07 novambra lasa teo, tao aminny Distrikani Bealanana, Faritra Sofia ny hetsika « Festival Jiro Mazava ».
Andro maneran-tany hiadiana amin'ny diabeta Hisy fitiliana maimaim-poana
Ho fanamarihina ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny diabeta izay hankalazaina isaky ny 14 novambra dia hanatanteraka fitiliana diabeta maimaim-poana ny AMADIA
Mpianatra niditra an-tsekoly - 2020-2021 Nitombo isa
Nahitana fitomboany 15 ka hatraminny 20% ny isanny mpianatra niditra eny anivonny sekolim-panjakana taminity taom-pianarana 2020-2021 ity. Efa misy ny fepetra raisina mifanaraka aminizany hoy Ramatoa Minisitra SAHONDRARIMALALA Marie Michelle.
Faritra Atsimo Misy ny tantsoroka aminny fitantanana ny fiompiana ondry amanosy
Anisanny fiompiana mifanaraka aminny toe-tany any aminny faritra atsimo sady mampidi-bola haingana ny fiompiana ondry amanosy.
FESTIVAL SARNAO 2020 Mahazo laka ny sary nandritra ny fihibohana
Sary miisa 34 mampiseho ny fiainana tao an-tanànani Barcelone, Espana nandritra ny fihibohana no aranty eny aminny AFT Andavamamba nanomboka omaly. Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly mantsy, ny hetsika fampirantiana sary Festival SARnao andiany faha-11 izay miompana indrindra aminny fampirantiana sary.